Etu ị ga - esi kpuchido saịtị gị na aghụghọ n’ahịa ahịa afọ a | ECommerce ozi ọma
N'afọ gara aga na azụmahịa e-commerce enwere mmụba 30% n'etiti ịzụrụ ihe na njedebe nke afọ gara aga, dị ka nnyocha nke ACI n'uwa dum.
Nke a pụtara na ihe dị ka otu zụrụ na 97 achọtara ịbụ aghụghọ. Na wayo Ọ bụghị ihe dị na ndepụta nke onye na-ere ahịa e-commerce, mana ị ga-eche ihu eziokwu ihu ma gbalịa izere ya n'ọnọdụ niile.
1 Olee otú ime ya? Ndị a bụ ụfọdụ azịza iji gbochie nke a ịme na azụmahịa gị:
1.1 Mee atụmatụ ma dee akwụkwọ ire ahịa kwa afọ:
1.2 Lelee usoro ihe mgbe niile:
1.3 Mgbe a bịara n'ịzụ ụdị, na-atụ anya ihe a na-atụghị anya ya:
Olee otú ime ya? Ndị a bụ ụfọdụ azịza iji gbochie nke a ịme na azụmahịa gị:
Mee atụmatụ ma dee akwụkwọ ire ahịa kwa afọ:
Ahịa afọ a dị ihe dịka 12 pasent afọ a, yabụ azụmahịa iji nyochaa na ngagharị saịtị niile chọrọ nlebara anya ọzọ. Isingmepụta atụmatụ iji meewanye mmegharị a ga-aga ogologo oge iji mee ka udo dịrị na saịtị ahụ ma gbochie ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ha ime.
Lelee usoro ihe mgbe niile:
Ga-ahụ mmụba izugbe na azụmahịa n'oge a, yabụ gbalịa ịlele anya oge niile na-ele ụdị ihe ọ bụla anya nke nwere ike ịpụta na metrics na-egosi aghụghọ aghụghọ, dịka mmụba na-adịghị mma na ụfọdụ ngwaahịa. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-enye ngwọta akpaghị aka iji nyochaa ma mezie ụdị ọnọdụ ndị a niile, n'ụzọ dị otú a, ụlọ ọrụ buru ibu anaghị eji aka ha eme ya.
Mgbe a bịara n'ịzụ ụdị, na-atụ anya ihe a na-atụghị anya ya:
Ndị ahịa nwere omume ịzụ ahịa dị iche n'oge ahịa nke afọ, yabụ, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị maka omume na-adịghị ahụkebe n'oge a, dịka ọmụmaatụ, ka onye ahịa zụta elekere dị oke ọnụ wee rịọ ka e ziga ya na mba ahụ. Idebe ahịa nke afọ gara aga nwere ike ịga ogologo oge n'ịgbalị ịchọpụta usoro ịzụ ahịa ndị ahịa na-atụ anya na ịkọ ihe nwere ike ime, si otú a na-enyocha usoro ọ bụla pụrụ iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahịa » Etu ị ga - esi kpuchido saịtị gị na aghụghọ n’ahịa ahịa a na - abịa n’afọ a
E-commerce dị mkpa maka 2018 a